ညဆို အရမ်းအေးတော့ အိပ်မရဘူး…အဘကို လာကယ်ပါနော် – Shwe Thadin
ညဆို အရမ်းအေးတော့ အိပ်မရဘူး…အဘကို လာကယ်ပါနော်
အဘကို လာကယ်ပါနော်…ညဆို အရမ်းအေးတော့ အိပ်မရဘူး။ အသိ ညီလေးမှ ဖုန်းဆက် ကူညီတောင်းသဖြင့်…ညနေ အားတဲ့ချိန်လေးသွားရောက်ခဲ့တယ်။ အဘက အသက်(၅၄)နှစ် လူပျိုကြီး…အဘကို လာကယ်ပါနော်…
ညဆို အရမ်းအေးတော့ အိပ်မရဘူး။ အသိ ညီလေးမှ ဖုန်းဆက်ကူညီတောင်းသဖြင့်…ညနေ အားတဲ့ချိန်လေး သွားရောက်ခဲ့တယ်။ အဘက အသက်(၅၄)နှစ်…လူပျိုကြီး…ဇာတိ – မြိတ်ဘက်ကလို့ သိရပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်စီးရင်း…Accident ဖြစ်…ဆီးချိုကြောင့် ခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်။ရန်ကုန်က မသန်စွမ်း ဆေးရုံမှာ ခြေတုလာလုပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးရုံမှ တလ ပြန်ချိန်း သောကြောင့်…မြိတ်ပြန်ဖို့လဲ ငွေကြေးခက်ခဲရှိတာလဲ ပါသလို…ပြန်သွားပြီရင်လဲ…
တူမ အိမ်မှာ ကပ်နေရသောကြောင့် အဆင်မပြေ (တူမတွေကလဲ အမြင်မကြည်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်) ဆေးရုံက လကုန်လောက်မှ ခြေတုရမယ်လို့ ပြောတယ်တဲ့…ခြေတု မရခင်အချိန်လေးထိ…
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ခေတ္တ ခဏ တည်းခိုဖို့ ကူညီတောင်းသောလဲ…ဘယ်ကျောင်းကမှ လက်မခံခဲ့ဘူးတဲ့… ထို့ကြောင့် ပြီခဲ့တဲ့ (၂)လတည်းက ကားမှတ်တိုင်မှာ နေ့ကော ညကော နေတယ်တဲ့…မနက်ဆို လမ်းသွား လမ်းလာတွေ ပေးတာလေးနဲ့ စားတယ်တဲ့…
ညဆို ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်တဲ့ ညီလေးတို့ အိမ်က ထမင်းကျွေးတယ်တဲ့…ညီလေးမှ ညဆို ကားမှတ်တိုင်မှာ အိပ်အိပ်နေတဲ့ အဘကိုမကြည့်ရက်နိုင်တော့လို့…ကျနော့်ဆီ ဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျနော် သွားရောက်မေးမြန်းကြည့်တော့…အဘ…ရိပ်သာမှာ နေချင်လား ??နေချင်တာပေါ့ တူလေးရယ်…အဘမှာ ခိုကိုးရာမဲ့နေရတယ်…အဘ ဘုရားရိပ်…တရားရိပ်အောက်မှာပဲ နေချင်တော့တယ်။
အဘကို ကယ်ပါနော်…ညဆို အရမ်းအေးတော့ အဘ အိပ်မရဘူး…အဘကို လာကယ်နော်…အဘ မျှော်နေမယ်နော်…ဟုတ်ကဲ့…စိတ်ချပါ…ကျနော် အဘကို ရအောင်ကယ်မှာပါ။ အဘ တူလေး လာတာ မျှော်နေမယ်နော်…ဒီညတော့…အသိ ညီလေးတွေကပဲ စောင့်ရှောက်ပေး ထားပြီ။
မနက်ဖြန်တော့…ကျနော့် ဆရာ ဘဘရဲ့ ရွှေသန်လျင် ခိုနားရာ ဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ ပို့ဆောင် ပေးပါမယ်။ နောက်ရက်တွေတော့…အဘ နွေးနွေးထွေးထွေးလေး အိပ်စက်နိုင်ပါပြီ။ အော်…ညဆို ကျနော်တို့ လုံခြုံတဲ့ အိမ်ထဲမှာတောင် အေးနေရတာ…လမ်းဘေးနေတဲ့…
အဖိုးအဖွားများဆို ဘယ်လောင်တောင် ချမ်းနေကြရှာမလဲ…ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများ အတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက ကိုပူတူးနှင့်ဘော်ဒါများ ဖုန်း 09-5408437 သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်…
ရေခဲမုန့်ရောင်းပြီး မိသားစုအတွက်နဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရသေးတဲ့ အသက် 89 နှစ်အရွယ် ရေခဲရောင်းသူ အဘိုးအို
အဖိုးရေ…ဘာတွေရောင်းတုန်း? အမ်…ဘာပြောတာလဲ သား (အဖိုးက နားမကြားဘူး)